थाइरोमेगाली - प्रकार, कारण, लक्षण, निदान र उपचार - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
थाइरोमेगाली: सबै कुरा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्दछ
घर स्वास्थ्य कल्याण कल्याण लेखक-देविका बन्दोपाध्याय द्वारा देविका बन्दोपाध्याय अक्टुबर १२, २०१ on मा
घाँटीमा पुतलीको आकारको ग्रन्थि असामान्य रूपमा ठूलो परिणत भएको अवस्थालाई थाइरोमेगाली भनिन्छ। हामी सामान्यतया गोट्रेको रूपमा यो अवस्थालाई सन्दर्भ गर्दछौं। जे होस् यसको पछाडिको प्रमुख कारण अपर्याप्त आयोडिन हो, त्यहाँ पनि यसको कारणसँग सम्बन्धित अन्य कारणहरू हुन सक्छन्। लगभग, विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कम आयोडिन सेवनबाट ग्रस्त छ।
परिस्थितिको गम्भिरता ती मानिसहरूमा बढी हुन्छ जो समुद्री क्षेत्रबाट धेरै टाढा बस्छन् (वा उच्च उचाइमा) किनभने यो पत्ता लागेको छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पर्याप्त मात्रामा आयोडिनको मात्रा उनीहरूको खानापूर्वक पाउँदैनन्। जब थाइरोइड ग्रंथि पर्याप्त हर्मोन बनाउन सक्दैन, यो क्षतिपूर्ति गर्नको लागि बढ्छ।
हिंदी भाषामा मर्ग मुसलम बत्ती
थाइरोमेग्ली भनेको के हो?
जब कुनै व्यक्ति गोट्रे हुन्छ, बढेको, सुन्नी ग्रन्थी घाँटीको बाहिरी भागबाट एकदम देखिन्छ। यो अवस्था भएको व्यक्तिलाई निल्न र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यदि अवस्थालाई उपचार नगरी छोडियो भने यसले गम्भीर नोक्सान निम्त्याउँछ जहाँ थाइरोइड ग्रंथि अत्यधिक प्रभावहीन हुन सक्छ र थाइरोइड हर्मोन बिल्कुलै बनाउन वा धेरै बनाउने क्रमशः हाइपोथायरायडिज्म र हाइपरथायरायडिज्म निम्त्याउँछ।
धेरै पढ्नुहोस्: एक पातलो कम्मर को लागी सुपर फूड्स
थाइरोमेगालीका बिभिन्न प्रकार
थाइरोइडको कार्यक्षमता, आकार र बृद्धि ढाँचामा आधारित, थाइरोमेगालीका बिभिन्न प्रकारहरू हुन्:
इथाइरोइड - सूजनले ग्रन्थीको सामान्य कामकाजलाई असर गर्दैन
हाइपरथायरायडिज्म - थाइरोइड ग्रंथि ओभरएक्टिभ हुन्छ
हाइपोथायरायडिज्म - थाइरोइडले थाइरोइड हर्मोनको सामान्य मात्रा भन्दा कम उत्पादन गर्दछ
डिफ्यूज गोइटर - ग्रन्थिको विस्तार हाइपरप्लासियाको कारणले हो
नोडुलर गिट्रे - थाइरोइड भित्रका ऊतकोंको क्षेत्रहरू बढेर सुन्निने
सिस्टिक ग्वाइटर - थाइरोइड नोड्युलहरू तरल पदार्थले भरियो
कक्षा १ - सामान्य रूपमा बाह्यले देख्न नसक्ने सूज
कक्षा २ - सूजन देख्न र महसुस गर्न सकिन्छ
कक्षा - - सूजन ठूलो छ र स्टर्नम तिर विस्तार हुन्छ
थाइरोमेगालीका कारणहरू के के हुन्?
यस अवस्थाको प्राथमिक कारणहरू:
पीठ दुख्ने राहतका लागि योग आसन
आयोडिनको कमी: T4 र T3 हर्मोनको उत्पादनमा प्राइम योगदानकर्ता आयोडिन हो। जब थाइरोइडले पर्याप्त हर्मोन बनाउन सक्दैन, एक क्षतिपूर्तिको रूपमा, यो विस्तार हुन्छ।
ग्र्याभ्स रोग: यो एक स्वचालित रोग हो। प्रतिरक्षा प्रणालीले गल्तीले थाइरोइड ग्रंथिलाई आक्रमण गर्दछ। घटनाहरूको क्रममा, थाइरोइडले अधिक हर्मोनहरू बढाउने र उत्पादन गर्न थाल्छ।
हाशिमोटो रोग: यो एक स्वचालित प्रतिरोधक विकार हो। थाइरोइड ग्रंथि बिग्रिएको छ र पर्याप्त हर्मोन उत्पादन गर्न असक्षम छ।
नोड्युलहरू: यो तब हुन्छ जब फ्लुन्डले भरिएको नोड्युलहरू ग्रन्थिमा बढ्छ र ग्रंथि ठूलो बनाउँदछ।
सूजन: ग्रन्थिको सूजनलाई थाइरोइडिटिस भनिन्छ। यो संक्रमण, विकिरण उपचार वा औषधिको कारणले हुन सक्छ।
प्रारम्भिक लक्षण र लक्षण के हुन्?
प्राथमिक लक्षण एक विस्तारित थाइरोइड ग्रंथि हो। यो घाँटीको बाहिरी भागबाट बाहिरी रूपमा देखिन्छ। विस्तारित क्षेत्रको दबाबको कारणले गर्दा, निम्न लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्:
सास फेर्न वा निल्नुमा कठिनाई
हाइपोथायरायडिज्मसँग सम्बन्धित लक्षण:
सुख्खा कपाल र छाला
Hyperthyroidism संग सम्बन्धित लक्षण:
थाइरोमेगाली कसरी निदान गरिन्छ?
घाँटीको शारीरिक परीक्षणले डाक्टरलाई थाइरोमेगालीको उपस्थिति निदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। नियमित शारीरिक जाँच डाक्टरलाई घाँटी वरिपरि लगाउँदछ र तपाईंलाई निल्न भन्दछ। अन्तर्निहित कारण पहिचान गर्न आवश्यक हुन सक्छ यदि एक ठूलो ग्रन्थी फेला परेमा।
निम्नलिखित अन्तर्निहित कारण निदान गर्न सकिन्छ:
कसरी स्ट्रेटर बिना घरमा स्थायी रूपमा कपाल बनाउन
थाइरोइड हर्मोन परीक्षण: यसमा रगत परीक्षणको माध्यमबाट TSH र T4 को मात्रा नाप्नु समावेश छ।
अल्ट्रासाउन्ड: यसले थाइरोइड ग्रंथिको छवि सिर्जना गर्दछ डाक्टरलाई अवस्था निर्धारण गर्न मद्दत गर्न।
थाइरोइड स्क्यान: एक रेडियोधर्मी आइसोटोप तपाईंको कुहिनिको भित्री भागमा रहेको नसमा इंजेक्सन गरिन्छ। यसले कम्प्युटर स्क्रिनमा थाइरोइडको छवि उत्पादन गर्दछ जुन डाक्टरले मूल्या can्कन गर्न सक्दछ।
बायोप्सी: थाइरोइडबाट टिश्युको नमूना राम्रो सियोको प्रयोग गरी लिएर प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाइन्छ।
एन्टिबडी परीक्षणले डाक्टरलाई तपाइँको थाइरोमेगाली अवस्थाको आकलन गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।
उपचार विकल्पहरू के के हुन्?
थाइरोमेगालीका लक्षणहरूको उपचार गरीन्छ र यो आदर्श अन्तर्निहित कारणमा निर्भर गर्दछ।
आयोडिनको कमीको कारण: आयोडिनको सानो खुराकले थाइरोइड ग्रंथिलाई सिको गर्न मद्दत गर्दछ।
हाशिमोटोको रोगको कारणले: यो प्राय: कृत्रिम थाइरोइड हर्मोन प्रतिस्थापनको प्रयोग गरेर उपचार गरिन्छ।
ग्रेभ्स रोगको कारण: औषधीले थाइरोइड हर्मोनको उत्पादन कम गर्न मद्दत गर्दछ।
गर्भावस्थामा: गर्भावस्थामा थाइरोमेगालीले असमय जन्म र कम जन्म तौल जस्ता मुद्दाहरूलाई निम्त्याउन सक्छ। गर्भवती महिलालाई ओभरएक्टिभ थाइरोइड ग्रंथिको उपचार गर्न औषधि दिइन्छ। गर्भावस्थामा रेडियोडाइन थेरपी सिफारिस गरिदैन।
नोड्युलहरूको कारण: क्यान्सर नभएको नोडुलहरूको उपचार हुँदैन, यद्यपि, वर्षौंको लागि घनिष्ट अनुगमन आवश्यक पर्दछ। सिंथेटिक थाइरोइड हार्मोनहरूलाई तोकिएको हुन्छ यदि नोडुलले थाइरोइड हर्मोनलाई अधिक उत्पादन गर्दछ।
सूजनको कारणले: हल्का एन्टी-इन्फ्लेमेटरी औषधिहरूले दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ। मौखिक स्टेरोइड सिफारिश हुन सक्छ यदि सूजन गम्भीर छ।
हस्तरेखा शास्त्र मा प्रेम विवाह को संकेत
कसरी सी खण्ड पछि पेट फ्याट कम गर्न
naturally दिनमा पेटको बोसो कसरी गुमाउने
कसरी हात र खुट्टामा झुर्रीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ
कसरी रणबीर कपूर कपाल प्राप्त गर्ने
वजन घटाउनका लागि उत्तम शाकाहारी आहार चार्ट